DEG DEG+SAWIRO: DFS oo ku dhawaaqdey in Lasoo afjaray weerarkii NAASA-HABLOOD & Khasaaraha oo kordhay - BAARGAAL.NET
alshabaab muqdisho qarax
DEG DEG+SAWIRO: DFS oo ku dhawaaqdey in Lasoo afjaray weerarkii NAASA-HABLOOD & Khasaaraha oo kordhay
✔ Admin on June 25, 2016
Taliska ciidamadda sida gaarka u tababaran ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay soo afjareen weerar ay kooxda xagjirka ah ee Al- Shabaab ku qaadeen Hotel Naasa-Hablood 1 ee kuyaala caasumada Soomaaliya.
Dawladdu waxay sheegtay in dhimashada aysan wali ka hadlin Karin oo qiimeyn lagu wado, laakiin ay si toos ah ciidamadu u toogteen kii ugu dambeeyey dableydii gashay Hotelkaas oo awood u yeelan waayey in ay galaan qeybta saree e Hotelka.
Illaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay weerarkan hase yeeshee warar laga helayo dad ku dhow dhow hotelka ayaa sheegaya in ilaalada hotelka ay u suurtogashay inay dableydii hubeysnayd ay ku celiyaan qeybta hore ee hotelka.
Tirada dhimashada ayaa lagu sheegay in ka badan 25 qof, oo ay ku jiraan Siyaasiin, xubno hadda xilal hayey iyo Sadex kamid ah Shaqaalaha Idaacadda Goobjoog ee magaalada Muqdisho.
Isbitaalada gaarka loo leeyahay ee magaalada Muqdisho ayaa la gaarsiiyey dad qaba dhaawacyo kala gedisan, waxayna Isbitaaladu raadiyaan dhiigag dadkaas lagu badbaadiyo.